Mallattoolen hundi tuuta mallattoo keessatti ijaaramaniiru. Tarre saanduqa keessa tuuta mallatto yaadame fili. Dirree armaan gadiitti gareen mallattoo gita'antu mula'atu.
Yemmu mallattoon filatame, tarree mallatto jalatti maqaan ajaja isaa ni dhufa akkasumaas fooyya'iinsi guddaatanis gara mirgaa sanduuqa keessatti dhufa. Akka as biratti agarsiisametti foddaa Ajaja keessatti barreefamu qabu.
Mallattoo saaguf, tarree keessa filii achumaan Saagu cuqaasi. Foddaa Ajaja keessatti maqaan ajaja gita'a ta'e ni dhufa.
Qaaqa Mallattoo Gulaalu banuuf as bira cuqaasi.
Title is: Mallattoolee